Farmaajo oo qaaday labadii tallaabo ee dalka burburisay | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Muran ka dhashay boobkii doorashadii kuraasta Baarlamaanka ee ka dhacday Soomaaliya 1969-kii ayaa la rumeysan yahay in ay sabab u ahayd khaarijinta Maxaxweynihii dalka Cabdirashiid Cali Sharma’arke iyo in waddanku uu gacanta u galo nidaamkii kalitaliska ahaa ee uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Doorashadaas oo ay ka qeyb galeen in ka badan 60 xisbi siyaasadeed, ayuu xisbigii talada hayay xoog iyo xeeladba ku helay 73 xubin, ka hor inta uusan guud ahaan 120 xildhibaan xareysan 123-dii kursi ee baarlamaanka, taas oo keentay in MW dalka uu toogasho ku dilo askari ka tirsanaa ilaaladiisa 15kii bishii Oktoobar 1969kii.
Boobkaas lagula kacay doorashada wuxuu kaloo hormuud u noqday in Militarigu xalaaleystaan xukunka isa-markasna 21 sano ku amar taagleeyaan dalka, kuwaas oo ugu danbeyn dalka ka huleelay billowgii 1991 xilli ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen.
Dadkii ay wadaantu u jileysneyd, 21-kaas sano, ayaa 1991 u yaqaanna sanadkii burburka, halka kuwii ay daranyadu darbiyada ku dileysay ee xaqooda la cunayay u yaqaannaan sandkii baraarada iyo burwaaqadu dhanka alle ka yimaadeen ee xornimada laga qaatay kadeedkii kacaanka.
Farmaajo, oo 8 Feb 2017, xilka Madaxweynaha loogu wareejiyay doorasho ku dhacday qaab dimuqraaddi ah oo natiijadeeda lagu wada qancay, ayaa si buuxda ugu weecday jidkaas, wuxuuna cagta saaray labadii wado ee hore dalka u burburiyay ee boobka doorashada iyo xukun isku dhajinta.
Farmaajo, wuxuu bishii April ee 2021 muddada xil-heynta ku darsaday labo sano oo sharci darro ah, taas oo sababtay in caasimaddu marti galiso dagaallo u dhaxeeya ciidamada dowladda.
Tan iyo markii la doortay, Farmaajo ma qaban doorasho xalaal ah, oo santuuq lagu kala baxay, wuxuu si qaawan u boobay doorashooyinkii Galmudug, Hirshabeelle iyo Koofur galbeed, mar kale, doorashooyinka baalmaanka 11-aad ee JFS, ayuu ku billaabay boob qaawan taas oo keentay qaadicidda natijada.
Sida ay caddeynayaan xogo aan hore u baahinnay Golaha Mucaarada ee Midowga Musharixiinta, ayaa qorsheeyay in ay dhidibada u taagaan Gole Qaran oo KMG ah, kaas oo dalka ka qabta doorasho la isla ogol yahay, taas oo la micno ah in 2022 uu waddanku marti galin doono doorashooyin is barbar socda.